Malunga nathi - Qingdao Evergrowing Cage Co., Ltd
ISETYHULA Fish Cage
Fish Cage isibiyeli
Evergrowing yinkampani ephambili ye ezidadayo khetshi zentlanzi zokulima iintlanzi emhlabeni kunye namanzi nonxweme. Thina bazahlulele ukuba bayile kwaye nokubonelela khetshi ezikumgangatho ophezulu intlanzi bebemenzela neemfuno zakho kunye neemeko zendawo.
Kuyekwe kubangele ukugqitywa ebalulekileyo kwezixa zeentlanzi zasendle. ukulima cage Fish ikhona isisombululo oluzinzileyo indalo kule ngxaki. Evergrowing sele esebenzela uphuhliso, ukwenziwa kunye nokuthengiswa yeentlobo ezahlukeneyo ezidadayo khetshi yeentlanzi. Le iikhetshi siya kubonelela siya nezifanele ukuba iimfuno zakho ethile. Uluhlu lwethu kuquka iiyunithi ezifanelekileyo encinane umsebenzi wophando okanye imveliso Qhotsa ekunene ukuya khetshi ezinkulu setyhula iHDPE iintlanzi ekwaziyo ukusebenza kwiimeko yolwandle.
Le nkampani iye afezekiswa kwaye kuyaqhubeka ukukhula okuthe ngcembe khetshi iintlanzi ngokunikezela.
Ukwandisa ubukho kwimarike kunye uvule ezinye nekhono market ehlabathini lonke.
Ebudeni beminyaka yophuhliso, siye wakha olusondeleyo ulwalamano lwentsebenziswano kunye China Ocean University, Fisheries Institute kunye izazinzulu yasemanzini onamava ehlabathini lonke. Thina umniki izisombululo kunye neenkonzo ukwenzela ukuphucula inzuzo yakho.
Evergrowing na iqabane lakho efanelekileyo ekuphuhliseni kwiprojekthi ukufuya ehokweni.
Udumo kunye ixesha elide, Flexible nepheleleyo
Ukubonelela ngezixhobo engcono yokonga iindleko yaye ziphucule imveliso
Ugunyaziso ishishini ngokwakokusingqongileyo nolunika eziphilayo
Lwedilesi: Room F13, Phambili Floor, Zhongshan Road, Qingdao, China
Ukhangela kwi amathemba fisherie ...
Ingxelo entsha ngokubambisana yi-Bank World, FAO, kwaye International Policy Food Research Institute ujonga amathemba fis ...